MgHla's Diary (မောင်လှ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ): April 2010
Posted by MgHla မောင်လှ at 3:44 pm
စားကျက်သိမ်းချိန် B&W version
စားကျက်သိမ်းချိန် Colour version
My Labels: Photos, Rural
My Labels: Black & White Photo
Mac OS X နဲ့ Windows ဘက်မှာ အချိန်မတူတဲ့ ပြသနာကို windows ဘက်မှာ run ကနေ regedit ရိုက်ထည့်ပြီး HKLM\_SYSTEM\_CurrentControlSet\_Control\_TimeZoneInformation ကိုသွား... RealTimeIsUniversal ဆိုတဲ့ DWORD အသစ်တည်ဆောက်ပြီး value ကို 1 ပေး... restart ချလိုက်... ပြန်တက်လာတဲ့အချိန် windows ဘက်မှာ အချိန် မှန်သွားရော...
Microsoft Excel 2007 မှာ အသစ်ဖွင့်လိုက်တိုင်း font က Calibri လို့ပေါ်နေတယ် မဟုတ်လား... အဲဒါကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ font ပြောင်းလို့ ရပါတယ်... Office button ကိုနှိပ် Excel Options ကို click နှိပ်ပါ... When creating new workbooks အောက်မှာရှိတဲ့ Use this font မှာ ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ font ကို ပြောင်းပြီး OK နှိပ်ပါ...
For your changes to the standard font to take effect, you must quit and then restart Microsoft Office Excel လို့ပြလာရင် OK နှိပ်ပါ... ဒီ message မပြရင်တော့ font တကယ်ပြောင်းသွားမှာ မဟုတ်ဘဲ အရင် font ပဲဖြစ်နေမှာပါ...
Excel ထဲက ထွက်ပြီး ပြန်ဝင်ရင် Calibri font နေရာမှာ ကိုယ်ပြောင်းခဲ့တဲ့ font ဟာ ပုံမှန်ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်...
My Labels: Max OS, Windows, Date and Time, Microsoft Excel 2007, default font
Rows အလိုက်ထည့်ထားတဲ့ data တွေကို Columns အလိုက်ပြောင်းခြင်း
Posted by MgHla မောင်လှ at 11:31 am
Microsoft Excel မှာ အပေါ်က ပုံထဲက အတိုင်း row အလိုက် ထည့်ထားတဲ့ Data တွေကို အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်း column အလိုက် ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် လုပ်တဲ့နည်းက လွယ်ပါတယ်။
1. cell တွေကို select ပေးပါ။
2. copy ကူးပါ။
3. လိုချင်တဲ့နေရာမှာ selector ချပြီး right click နှိပ်ပါ။
5. ပေါ်လာတဲ့ pop menu ထဲမှ Paste Special ကို click လုပ်ပါ။
အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်း Paste Special diaglog box ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
6. Transpose ၏ ဘယ်ဘက်တွင် ရှိသော check box ထဲတွင် အမှန်ခြစ် လေးပေါ်အောင် click လုပ်ပြီး OK ကို နှိပ်ပါ။ row အလိုက် ထည့်ထားသည့် data များ column အလိုက်ပြောင်းသွားသည်ကို တွေ့ ရပါလိမ့်မည်။
ဒီနည်းနဲ့ Columns အလိုက်ထည့်ထားတဲ့ data များကို Rows အလိုက် ပြောင်းနိုင်ကြောင်းပါ။
0 comments Links to this post Labels: Excel, how to
Posted by MgHla မောင်လှ at 1:00 am
5 comments Links to this post Labels: April Fool
Rows အလိုက်ထည့်ထားတဲ့ data တွေကို Columns အလိုက်ြေ...
နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်... ကျတော် သွားတော့မယ် ဟိုး... အဝေး...